LIGIM-PARITRA BOENY : Mpilomano 53 isa no hiatrika ny tompondaka nasionalin’ ny lomano “petit basin”
Nanome tsodrano sy teny fankaherezana ireo ankizy mpilomano miisa 53 avy eto Mahajanga hiatrika ny fiadiana ny amboara nasionaly amin’ny taranja lomano “petit basin” 25metatra ny lehiben’ny Faritra Boeny, Bazezy Clavelah. 17 février 2020
Noraisin’ny lehiben’ny Faritra tamin’ny fomba ofisialy tao amin’ny efitrano malalaka fivoriana ao amin’ny bloc administratif izy ireo. Misy klioba efatra ireo mandrafitra ny ligim-paritry ny lomano Boeny, izay manomboka manatona ireo tompon’andraiki-panjakana. Faly ireo ray aman-dreny sy mpikarakara ireo mpilomano ireo satria voaray tamin’ny fomba ofisialy, ny alatsinainy tolakandro io. Mitondra ambony ny voninahitry ny Faritra hatrany mantsy ireo mpilomano eto Mahajanga isaky ny misy fifaninanana sy fiadiana amboara.
Nanome toky ihany koa ny lehiben’ny Faritra amin’ny hijerena akaiky ny olana sedrain’ny ligim-paritra. Nanambara moa ny tompon’andraikitra fa mino fa hahazo vokatra tsaratsara kokoa satria nahazo tsodrano tamin’ny olobe. Ny taona 2017 no nandray farany fifaninanana nasionaly ny teto Mahajanga ka izao indray vao handray dia ny tompondaka lomano “petit basin” 25metatra. Ny 28 sy 29 febroary ary ny voalohan’ny volana marsa no hanaovana io fiadiana ny amboara “petit basin” io. Marihina moa fa ao amin’ny piscine papon ao amin’ny sekoly Saint Gabriel no fanaovan’ireo mpilomano fanazarantena sy fanomanana eto Mahajanga.